သင်သည်အားကစားခန်းမ၌လေ့ကျင့်ရန်စတင်ရန်စဉ်းစားနေပါကသင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် ပထမနေ့တွင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသံသယ ၀ င်သည်။ တကယ်တော့သင်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပေါ် မူတည်၍ အားကစားရုံ၌စတင်နိုင်သည် နည်းနည်းမသက်မသာနှင့်စျေးကြီးဖြစ်.
ဥပမာအားဖြင့်သင်ကြိုးစားလျှင် အလေးချိန်သို့မဟုတ်ကြွက်သားထုရရှိမှု, သင်ကြားမှုနှင့်ဝယ်လိုအားသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့်မတူပါ ပုံသဏ္inာန်၌နေပါ, ဒါမှမဟုတ်ရုံအပန်းဖြေ။
1 အကောင်းတစ် ဦး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏အကူအညီ
အကောင်းတစ် ဦး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏အကူအညီ
အားကစားခန်းမမှာစတုန်းကကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီရဖို့၊ ငါတို့ကိုကူညီဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ ငါဆိုလိုတာက သင်တန်းအစီအစဉ်.
ပထမ ဦး ဆုံးနေ့များအတွက်အချို့သောအကြံပေးချက်များ
သငျသညျသငျ့သညျ စိတ်ရှည်ပြီးစိတ်ရှည်ပါ။ အရေးကြီးသောအရာသည်ရလာဒ်များကိုချက်ချင်းရရန်မဟုတ်ဘဲလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ရ တစ်ခုချင်းစီကိုလှုပ်ရှားမှု၏မှန်ကန်သော technique ကိုအပေါ်အာရုံလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုပါ။ နှင့်ဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုတစ်ချိန်တည်းမှာ။
ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်လေ့ကျင့်ခန်းပါဝင်လျှင် အလေးမခြင်းအသုံးပြုသောနည်းပညာသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်အများကြီးရှိသည် အလွန်အကျွံအလေးချိန်ကိုသတိပြုပါ ဒဏ်ရာရခြင်းသာမကနောက်တစ်နေ့တွင်တောင့်တင်းခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။
El အစည်းအဝေးများအတွက်အချိန်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ရပါမည်။ သင်၏အလုပ်ချိန်ကိုမလွန်ပါစေနှင့်။ ပထမနေ့သည်ခဏသာဖြစ်သင့်သည်၊ ဒုတိယသည်အနည်းငယ်ပိုကြာသင့်သည်။
ထဲမှာ လူများစွာနှင့်အတူအတန်းအထူးသဖြင့်အားကစားခန်းမ၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့များတွင်သင်သည်အများကြီးမလေ့လာဘဲကောင်းစွာအလုပ်မဖြစ်ပါ။
မမေ့ရအောင် နွေးထွေးခြင်းနှင့်ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းများ အစည်းအဝေးပြီးနောက်။
အားကစားခန်းမသို့သင်သွားသည့်အ ၀ တ်အစားများဖြစ်ရမည် အေးမြ။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးချွေးများကိုစုပ်ယူပြီးအစိုဓာတ်ကိုမစုစည်းနိုင်သောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်.
ပျောက်ဆုံးနေသူလည်းမဖြစ်သင့်ပါ လက်သုတ်ပုဝါ ချွေးအတွက် ဂီ သင့်လျော်သောဓါတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းညှိရန်အတွက်၊ စောင့်ကြည့်ရန်နာရီ၊ လိုအပ်ပါကလက်အိတ်များစသဖြင့်ဖြစ်သည်။
ပုံရိပ်ရင်းမြစ် - Cambiatufisico / Fape ပွိုင့်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အားကစားခန်းမမှာပထမဆုံးနေ့ဘယ်လိုရှင်သန်နိုင်မလဲ